I-China i-Custom Promotion Printa esebenza ngokuTsala ibhegi yeCinch Bag mveliso kunye nabenzi | USunnan
Ukuprintwa okuPhezulu okuPhathekayo okuSebenzayo okuTsala iBhegi yeCinch Bag
Iingxowa zokubopha ezingxonxwayo zinokwenza isipho esikhulu. Ngokuqinisekileyo kuya kubetha nabani na. Ngokukodwa abantwana kunye nolutsha.
Inombolo yomzekelo: I-SN-B1102
Umbala: Mfusa okanye ngentando yakho
Igama lemveliso Ukuprintwa okuPhezulu okuPhathekayo okuSebenzayo okuTsala iBhegi yeCinch Bag
Inombolo yomzekelo I-SN-B1102
UKUDWALA IBHAgi: Iibhanti ezi-2 kwicala ngalinye nakwikona engezantsi, ziqiniswe ngemitya yelinayiloni ethambileyo. Ungarhuqa intambo ukuze uvale ibhegi yesikolo, emva koko inokuba yingxowa yobhaka. Yenza ukuba ugcine izinto ngokukhawuleza kwaye uzingenise kwaye uphume ngokulula.
IZINTO: Yenziwe ngombala ophantsi we-polyester, ezi bhegi zine-anti-mibimbi kunye nokugcinwa kwemilo elungileyo. Iyahlambeka ngokulula, inokuphinda isebenze kwakhona, ingangeni manzi, isongeke, ilula.
UYILO OLUPHOLILEYOUyilo olushicilelayo, olunesitayile kakhulu, olunokuhlambeka ngokulula, olunokuphinda lusebenze kwakhona kwaye luhlale ixesha elide. Uyilo oluhlengahlengisiweyo lomtya lunokuzikhulula izandla zakho kwaye luncede ukunciphisa umthwalo wamagxa. Uyilo lomxholo wekhathuni uyathandwa phakathi kwabantu abaninzi. Okanye unokubonelela ngoyilo lwakho lokuprinta, sinokuzenzela uyilo lwakho olwahlukileyoibhegi yomtya.
FOLDABLE & SUPER ukukhanyaInokugoqwa ngokukhawuleza ngokukhawuleza kunye nobukhulu becompact.
UMGANGATHO OMKHULUI-45 * 34cm, amandla aphakamileyo, ayigcini iibhegi zakho kuphela, kodwa inokugcina izihlangu, iimpahla okanye izinto zokuthambisa zemihla ngemihla, ikuncede ugcine ibhegi yakho okanye iimpahla zilungelelanisiwe, ikunike ukufikelela okukhawulezayo nokulula kokusebenzisa, ukuzikhusela kumonakalo nakwimikrwelo kubangelwa kukungqubana.
UKUSEBENZA KAKUHLE: Amaqhosha entsimbi kunye nemixwayo egxalabeni emaphethelweni nasezikoneni ziyomelezwa ukwenza inxenye yoxinzelelo yomelele, nto leyo ephucula kakhulu ukuzinza kwebhegi yentambo yokumpompa.
ISICELO: Ilungele imisebenzi emininzi, ukuzivocavoca, imidlalo, kubandakanya ukudada, ukuhamba, uhambo losuku, iindlela zemidlalo, ukuhlala ubusuku, iholide, ukubaleka, ukuyokuthenga, i-Streetball, ulwandle, ukubaleka, i-yoga, umdaniso, ukuhamba, ukuqhubeka, umthwalo, inkampu , ukunyuka intaba, umsebenzi weqela, iscout, uqeqesho, imidlalo yezemidlalo, isifundo se-PE esikolweni nokunye!
Egqithileyo Umtya wePolyester oSasazwayo woKwenziwa kwezeMidlalo ngeNgxowa yeMigca yangaphambili
Okulandelayo: Ihowuliseyili Quality Camo Luhlala Hunting Sport yangaphandle Drawstring ubhaka
ukuprinta ibhegi yomtya